သင့်စိတ်ခံစားချက်ကို ပျော်ရွှင်စေတဲ့အစားအစာ ၆မျိုး
သင့်စိတ်ခံစားချက်က သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ်မှာ အများကြီးထိရောက်မှုရှိစေပါတယ်။ သင့်စိတ်ခံစားချက်ကောင်းမွန်မှသာ အခြားလုပ်စရာရှိတာတွေကို သေချာအာရုံစိုက်လုပ်ကိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ဖိစီးနေတယ်လို့ထင်တဲ့အခါမျိုးမှာ အခြားစိတ်ဖိစီးမှုပြေလျော့စေမယ့်အရာတွေပြုလုပ်သင့်သလို စိတ်ခံစားချက်ကောင်းမွန်စေမယ့် အောက်ပါအစားအစာတွေကိုလည်း စားပေးနိုင်ပါတယ်။
စွမ်းရည် လူနေမှုဘဝ ကိုးကားစာများ
ခုချက်ချင်း ပြုပြင်သင့်သော ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကျင့်ဆိုးများ
ငွေဆိုတာ သုံးတတ်ကိုယ့်အတွက်အများကြီး အကျိုးရှိစေတဲ့ ကျွန်လိုခိုင်းစေနိုင်ပြီး အသုံးမတတ်ရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ သခင်လို ကိုယ့်ကို ပြန်ပြီး ခိုင်းစေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင် သတိကြီးကြီးထားပြီး မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေရှိရင် ချက်ချင်းပြုပြင်သင့်ပါတယ်။ အဲဒီ့ထဲကမှ ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး လုံးဝနလန်မထူနိုင်စေမယ့်အကျင့်ဆိုးတွေကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
?? ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ Christmas အခါသမယရဲ့အဓိပ္ပါယ်လေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်??
Christmas အချိန်အခါဆိုတာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကာလလေးတစ်ခုအဖြစ် နှလုံးသားထဲမှာ သိထားပြီးသားပါနော်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေဖြန့်ဝေရာ ကာလလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ခရစ်စမတ်ရောက်နေရင်ကို လူက ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေသလိုခံစားကြရတာမို့ စာချစ်သူတွေလည်း အဲဒီ့ခံစားချက်ကို ခံစားဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ချစ်စရာကောင်းပြီး မေတ္တာတရားနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ ခရစ်စမတ်အထိမ်းအမှတ် စကားလက်ဆောင်လေးတွေကို မျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ #BAWA101 #ChristmasQuotes
ကျန်းမာခြင်းသည်လာဘ်ကြီးတစ်ပါးဆိုတဲ့အတိုင်း ကျန်းမာရေးကောင်းမှ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာလုပ်ချင်တာတွေအတွက် အကျိုးရှိအောင်ထိထိရောက်ရောက် ကြိုးစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြော်င့ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်တဲ့အနေနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို နေ့စဥ်ဂရုတစိုက်နေထိုင်စားသောက်ဖို့လိုပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက် နေ့စဥ်စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံကိုပဲ သတိထားနေထိုင်ဆင်ခြင်မယ်ဆိုရင်တောင် အများကြီး ထိရောက်ပါတယ်။ ဖြစ်လာမှကုသခြင်းက ငွေလည်းကုန်၊ လူလည်းထိခိုက်၊ စိတ်လည်းပင်ပန်းရပါတယ်။ အရမ်းဆိုးဝါးတဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာမှကုသခြင်းထက် မဖြစ်ခင်က စနစ်တကျ နေထိုင်စားသောက်ဖို့အတွက် အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းအချို့ကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဘဝမှာ အကောင်းဆုံး အရာတွေကို လုပ်နိုင်သူတွေသာ ပျော်ရွှင်ကြတာပါ။
အောင်မြင်တဲ့လူတွေ လက်ကိုင်ထားတဲ့ အတွေးများ
အောင်မြင်တဲ့လူတွေက ကံကောင်းလို့အောင်မြင်လာကြတယ်ဆိုတာမျိုး မရှိပါဘူး။ သူတို့ရည်မှန်းထားတဲ့အရာကို သေချာလေး စိတ်ကူးပုံဖော်တတ်ပြီး တစိုက်မတ်မတ် ဇွဲမလျော့ အရှုံးမပေး လုပ်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် အောင်မြင်သူတွေရဲ့ စိတ်ထားအချို့ကို ကိုယ့်အတွက် အသုံးတည့်မယ်ဆိုရင် သင်ယူသင့်တာသင်ယူရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်အတွက် အရှုံးပေးမိတော့မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ ပြန်လည်အတုယူနိုင်အောင် အောင်မြင်သူတွေရဲ့စိတ်ထားနဲ့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ဘယ်လိုမြင်ပြီး ဘယ်လိုအတွေးတွေကို လက်ကိုင်ထားသလဲဆိုတာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်နော်။
"ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာ ကျန်းမာရေးအတွက် ဂရုတစိုက်လိုက်နာပြီး နေထိုင်စားသောက်သင့်တဲ့ပုံစံ”
အခုဆိုရင် ကိုဗစ်ကာလက အင်မတန်ရှည်ကြာခဲ့ပြီလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ကိုဗစ်ကိုကြောက်လန့်ပြီး အိမ်ပြင်မထွက်ဘဲလည်း နေလို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်လာပါပြီ။ စားဝတ်နေရေးအတွက် မဖြစ်မနေ အပြင်ထွက်သင့်ရင်ထွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေကို ပြန်ပြီးလည်ပတ်ဖို့ကိစ္စတွေ စသဖြင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အိမ်ပြင်ကိုထွက်ရတဲ့အခါ ကိုဗစ်နဲ့အတူယှဥ်တွဲနေထိုင်သွားနိုင်ဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် New Normal lifestyle ကို လက်ကိုင်ထားပြိး လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်မှဖြစ်တော့မှာပါ။ အဲဒါကြောင့် အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်အောင် ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ စားဝတ်နေရေးအခြားသောကိစ္စတွေအတွက်လည်း လည်ပတ်နိုင်အောင် အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဥ်လို ကျင့်သုံးနေထိုင်သွားသင့်ပါတယ်။